Hay’adda NISA oo lagu eedeeyay inay is hortaagtay baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Hay’adda NISA oo lagu eedeeyay inay is hortaagtay baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil
Hay’adda NISA oo lagu eedeeyay inay is hortaagtay baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil
Ma muuqato wax horumar ah oo weli laga sameeyay baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax, tan iyo 24-kii bishii July, markaas oo qoyskeeda ay Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida u gudbiyeen liis ay ku qoran yihiin magacyada shakhsiyaad ay ku tuhmayaan in gabadhooda ay ku maqan tahay. Maxkamadda ayaana 27-kii bishaasi magacawday guddi soo baara kiiskaasi.
Ikraan Tahliil oo ka tirsaneyd Hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka (NISA) ayaa la waayay 26-kii bishii June. NISA ayaa 2-dii bishii September sheegtay in gabadhaasi ay u gacan-gashay maleeshiyada Al Shabaab, ayna dileen, ha yeeshee Shabaabka ayaa si aan looga baran isaga fogeeyay eedeyntaasi.
Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil waxay marar badan ku celcelisay in gabadheeda ay ka bilaabato, kuna dhammaato gacanta NISA.
Xildhibaan Amina Maxamed Cabdi ayaa sheegaysa in Hay’adda NISA ay hortaagan tahay in baaritaan madaxbannaan lagu sameeyo kiiska gabadhaasi.
“Waxay Maxkamaddii iyo Xeer Ilaalintii, intaba ay noo sheegeen in kiiskan aysan sii wadi karin, illaa ay u madaxbannaanaadaan, waxay noo sheegeen inay dareemayaan humaag badan in uu jiro.” Ayay tiri Xildhibaan Amina Maxamed Cabdi.
Xildhibaan Amina Maxamed oo ah Xildhibaanadda Ikraan Tahliil ayaa Barnaamijka Galka Baarista u sheegtay “Inta aysan soo shaac bixin arrintan oo gabadha waa dhimatay aysan NISA baahinin ayaa waxaa dhacday baaritaankii intii ay ku guda jireen qoladii maxkamadda ahaa ay dhaheen anagga hay’ad dowladeedaa nahay, inaad na soo dhexgashaan nama baari kartaan, anagaa idiin soo baarayno ee dacwada la idin-keenay noo keena, anagaa baaritaanka sameynayno. Marka waxay diideen in la soo dhexgalo oo kiiskaas ay Xeer Ilaalinta baarto, waxay codsadeen inay ayagu baarayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha wareysanayaan.”
Xildhibaan Amina Maxamed ayaa sheegtay in ay wax layaab lihi ku noqotay dadkii la eedeynayay inay dalbadaan in kiiskaasi ay soo baaraan.
“Waxaa layaab ila noqotay dad ayaga la tuhmaayo oo la eedeynayo inay haddana ayaga is baarayaan, oo ay dhahayaan anagaa is baarayno oo dacwad ama jawaabo laga diyaarinayo la leeyahay hebel waan soo wareysanay, sidaanuu yiri.” Ayay tiri Marwo Amina Maxamed.
Waxyaabaha tuhunka ku sii kordhinaya Taliskii hore ee NISA iyo kan maanta xafiiska joogaba ayaa ah, sida aanay diyaarka ugu ahayn in xitaa Warbaahinta ay wax ka weydiisto maqnaanshaha gabadhaasi.
Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) oo horey u soo maamulay xafiiskan ayaa qaba in Ikraan Tahliil loo dilay wax uu ku sheegay dembi siyaasadeed, walow aanu wax caddayn ah arrintaasi u hayn.
“Gabadhaasi dembi siyaasadeed wax la xiriiro ayaa lagu dilay, dadka dilayna dembi siyaasadeed ayay galeen.” Ayuu Sanbaloolshe u sheegay Galka Baarista.
Kiiskan ayaa madax wareer ku riday Madaxda Dowlada Federaalka, marka aad eegto sida uu bishii September khilaaf uga dhex abuuray labada xafiis ee dalka ugu sarreeya, inkastoo 21-kii bishii hore October ee Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaruhuba ka heshiiyeen khilaafkoodaasi, ayna isu waafaqeen in baaritaanka kiiska gabadhaasi loo daayo Hay’adaha Garsoorka, tiiyoo aad mooddo in wax ka soo naaso cad aanu jirin
Hay’adda NISA oo lagu eedeeyay inay is hortaagtay baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil was last modified: November 3rd, 2021 by Admin
Khatar intee le’eg ayay TPLF iyo OLA ku yihiin Dowladda Itoobiya